Omenala England: Ụbọchị ịkụ ọkpọ na omenala ndị ọzọ | Akụkọ njem
Louis Martinez | | omenala, England
na Omenala Bekee ha na-emetụta ọnọdụ niile nke ndụ ndị Britain. A maara ọtụtụ n'ime ha n'ụwa nile, ma ndị ọzọ ga-eju anya ma ọ bụ, opekata mpe, ịchọ ịmata ihe.
Ndị bekee bụ ndị ama ama maka ịbụ omenala. N'ihi nke a, ọtụtụ n'ime omenala England malitere ọtụtụ narị afọ gara aga ma akwụsịbeghị ịkwanyere ha ùgwù. Otú ọ dị, ndị ọzọ na-ọhụrụ dị ka ndị metụtara na bọọlụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ha niile bụ akụkụ dị mma nke omenala ndị Britain na ọ ga-adị mkpa ka ị mara ha ma ọ bụrụ na ị na-eme njem na ala ndị ahụ. Anyị ga-eme njem nke ndị kacha amasị.
1 Omenala England: site na tii ruo ụbọchị ịgba ọkpọ
1.1 Ememe tii
1.2 Nhazi oge
1.3 Ụgbọala gaa n'aka ekpe
1.4 Omume nri
1.5 Ụbọchị ịgba ọkpọ
1.7 Ụlọ mmanya
1.8 Ememme ndị ọzọ n'etiti omenala ndị England
1.9 Mgbanwe nke onye nche
Omenala England: site na tii ruo ụbọchị ịgba ọkpọ
Anyị ga-amalite nyocha anyị nke omenala England na ndị a ma ama n'ime ha niile, nke a maara n'ụwa nile: tii elekere ise. Ma mgbe ahụ, anyị ga-ahụ ndị ọzọ a na-akọwachaghị nke ọma na, karịa ihe niile, karịa nke pụrụ iche.
Otu iko tii
Ndị Britain na-aṅụ tii kwa ụbọchị n'etiti elekere atọ na ise nke ehihie. Ọ bụ omenala malitere laa azụ, opekata mpe, ruo narị afọ nke iri na asaa. N'oge ahụ, ọ bụ ndị klas nke elu na-eme ya, ma n'oge a, ndị Bekee niile na-akwụsị ọrụ maka tii kwa ụbọchị n'oge ahụ.
N’ezie, àgwà a gbanyere mkpọrọgwụ nke na e bufere ya n’ebe ndị Britain na-achị. Ihe si na ya pụta bụ na dịka ọmụmaatụ, nakwa na Australia ha na-aṅụ tii kwa ehihie.
Iji soro ihe ọṅụṅụ ahụ, ndị Bekee nwekwara kuki ma ọ bụ achịcha. N'ime ndị ikpeazụ na-ewu ewu nke ukwuu okwute, ụfọdụ mpịakọta na-atọ ụtọ na-esi na Scotland. Ma ọ bụghị nanị oge ndị Britain na-aṅụ tii. E nwekwara ihe a na-akpọ ezumike tii. Ọ bụ obere ezumike a na-eme n'oge ọ bụla n'ụbọchị iji nweta otu iko ihe ọṅụṅụ.
Usoro ndị a na-egosi ụfọdụ omenala ndị England
Ndị Bekee nwere usoro nhazi dị iche iche karịa nke anyị ma anyị nwere ike were ha dịka omenala. Ha na-ebili n'elekere isii nke ụtụtụ, na-emekarị, ịga ọrụ. Maka nri, ha na-eme ya n'etiti awa 6 na 12. Ọ bụ ya nri ehihie na-adịkarịkwa ihe dị ka nkeji iri anọ na ise.
Dị ka ọ na-adịkarị, ha na-arụcha ọrụ ha na 18. Ọbụna ụlọ ahịa na-emechi n'oge ahụ, nke ga-eju gị anya ma ọ bụrụ na ị na-eji usoro Spanish eme ihe. Obere oge ha richara nri abalị wee lakpuo n’isi.
Agbanyeghị, ụlọ mmanya, nke anyị ga-agwa gị ma emechaa, na-emechi n'ihe dịka elekere iri na otu ma ọ bụ iri na abụọ. E nwekwara discos na-emeghe ruo ụtụtụ. Mana ihe kacha mkpa ị kwesịrị ịma gbasara nhazi oge Bekee bụ na ha bụ na-abịa n'oge nke ukwuu. Ya mere, ị gaghị edebe ha na-echere.
Ụgbọala gaa n'aka ekpe
Ụgbọ ala n'ụzọ aka ekpe
N'ezie na ị maraworị, ma n'isiokwu na omenala nke England, anyị ga-ekwurịrị ya. Ndị Britain na-anya n'ụzọ aka ekpe na ụgbọ ala ha bụ aka nri mbanye. A na-ekwu na mmalite nke omume a ka ọ dịbu tupu emepụtara ụgbọ ala.
O doro anya na na narị afọ nke XNUMX ndị isi mere ka ọ bụrụ ihe ejiji ịkwọ ụgbọ mmiri ha n'aka ekpe dị ka mmetụ aka aristocratic. E ṅomiri ha ngwa ngwa, omenala a na-enwekwa ike ruo taa. Ọ gbasaala n'ebe ndị ọ na-achịbu. A na-ejikwa ụzọ aka ekpe na ya New Zealand, India o Australia.
Otu efere azụ̀ e ghere eghe na ibe
A naghị eji ndị bekee mara mma gastronomy ha. N'ụzọ doro anya, ị ga-ahụ ihe ndị ọzọ. Ma nri ha anaghị atọ ụtọ karịsịa. Nri ụtụtụ bụ otu n'ime nri gị kacha mkpa. Ọ na-agụnye akwa a kpụkọrọ akpụkọ, anụ ezi, ihe ọṅụṅụ, cereal, kọfị, mmiri ara ehi, na toast ma ọ bụ pastry.
N'aka nke ọzọ, n'etiti ehihie, ha anaghị enwe Sanwichi ma ọ bụ salad. Ọ bụ ya nri ehihie nke anyị kpọtụrụ gị na ọ na-enyere ha aka inweta ruo oge tea, nke anyị gwakwara gị maka ya. N'ikpeazụ, ha na-eri nri abalị na obi ụtọ.
Nri abalị bụ, tinyere nri ụtụtụ, nri ya kacha mkpa. Ọ mejupụtara nke mbụ na nke abụọ N'ezie, nke ikpeazụ na garnish. N'aka nke ya, nke a nwere ike ịbụ salad, akwụkwọ nri sie ma ọ bụ poteto.
N'ihe gbasara efere ndị a na-ahụkarị, otu n'ime ihe ndị kacha esi nri bụ anụ anụ ụbọchị Sọnde. Ọ bụ ire anụ dị iche iche dịka ehi, ọkụkọ, atụrụ ma ọ bụ ọbụna ọbọgwụ. A na-etinye ya na poteto a ṅara n'ọkụ na akwụkwọ nri, yana ofe e ji yabasị mee na ihe ọṅụṅụ anụ nke ya. Otú ọ dị, nri ndị Britain kasị ewu ewu bụ ndị a ma ama azu na ibe ma ọ bụ azụ e ghere eghe na poteto. Ị ga-ahụ ya ebe niile na, na-emekarị, ọ na-esonyere ya na ihendori, karịsịa tartar.
Banyere desserts, na butter na achịcha pudding. Ntụziaka ya malitere na narị afọ nke XNUMX ma gụnyekwara akwa, mmiri ara ehi, nutmeg, mịrị na ngwa nri dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, ha na-eso ya na custard ma ọ bụ ude ụfọdụ, n'agbanyeghị na ị nwekwara ike ịnụ ụtọ naanị ya.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị ga-akọwara gị banyere ihe ọṅụṅụ a na-ahụkarị nke England, a ga-amanye anyị ịlaghachi na tii. Otú ọ dị, ka anyị ghara ikwughachi onwe anyị, anyị ga-akpọ gị Biya, nke kacha eri na ụlọ mmanya. Ndị Britain na-arịọ maka ya pint, ya bụ, maka iko nke ihe karịrị narị ise milliliters.
Ụbọchị ịgba ọkpọ
Onyinye maka ụbọchị ịgba ọkpọ
N'akụkụ a, anyị na-abịa ịgwa gị maka ụfọdụ n'ime mmemme pụrụ iche nke Bekee. Nke Boxing Day A na-eme ya na Disemba 26 na ọ bụ ememme nke malitere na Middle Ages.
N’oge ahụ, ndị a ma ama na-ekesara ndị ohu ha nkata nri. Omenala gara n'ihu wee ruo ụbọchị anyị. Agbanyeghị, Boxing Day nwere agwa dị iche ugbu a. Taa bụ ụbọchị ndị Bekee na-enye ibe ha onyinye ma were ohere ịzụrụ ihe. Ọzọkwa, e nwere ụbọchị ahụ Asọmpi bọọlụ Bekee ọ bụkwa omenala ka ndị nne na nna na-akpọtara ha ụmụ ha. Dị ka omenala ndị ọzọ na England, ọ gbasaala na mba ndị ọzọ na-asụ Bekee.
Anyị gwara gị maka asọmpi bọọlụ Bekee. Na anyị ga-akwụsị n'egwuregwu a, ebe ọ bụ maka Bekee ọ bụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukperechi. Nke a na-eme n'ọtụtụ akụkụ ụwa ndị ọzọ, mana ndị Britain bụ ezigbo ndị na-akwado egwuregwu a na-akpọ ọmarịcha egwuregwu.
Ọ bụghị n'efu, a na-ewere ha dị ka ndị mepụtara ya laa azụ na narị afọ nke XNUMX. Ụbọchị egwuregwu ọ bụla, ndị bekee na-ezukọ na ụlọ mmanya wee gawa ama ama egwuregwu. Mgbe esemokwu ahụ kwụsịrị, ha na-eme njem ọzọ iji kwuo ihe ndị kacha pụta ìhè mgbe ha na-eri otu pint biya.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Leeds
Anyị kpọtụkwara gị ụlọ mmanya. Ọ bụ aha e nyere na England Ogwe ndị ahụ na ọ bụ ebe ndị Briten na-ezute ndị enyi ha. Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a dị ihe karịrị otu narị afọ ma, ya mere, ha merela agadi.
Ileta ụlọ mmanya bụ otu n'ime omenala ndị England gbanyere mkpọrọgwụ n'etiti ndị bi na ya. Ọtụtụ n'ime ha na-eme ya kwa ụbọchị tupu nri abalị ma ọ bụ mgbe nri abalị gasịrị. Nke ukwuu na ụlọ mmanya dị mkpụmkpụ maka ụlọ ọha, ya bụ, nke ụlọ ọha.
Ememme ndị ọzọ n'etiti omenala ndị England
Guy Fawkes abalị
Na mgbakwunye na ụbọchị ịkụ ọkpọ, ndị Britain nwere ememme ndị ọzọ pụrụ iche. Ọ bụ ihe dị iche iche guy fawkes night. Cheta mbọ a nwara igbu eze ahụ dara ada James i na 1605.Ha bụ ihe omume ndị a na-akpọ Ntụle egbe ha chọkwara itinye eze Katọlik n’ocheeze ahụ.
Ma ihe kacha amasị anyị, n'agbanyeghị akụkọ ihe mere eme, bụ na English na-echeta ihe omume ndị a ọ bụla ise nke November na-emezi oku na-eri caramel apụl.
N'aka nke ọzọ, festivities nke Ista ha nwere ogologo omenala na England. Mgbe ụfọdụ, ha adịghị nnọọ iche na nke anyị. Ma ha nwekwara ihe ha pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, ihe a na-akpọ Anwụ Satọde. Dị ka aha ya na-egosi, ọ na-ewere ọnọdụ na Thursday tupu Ista na, n'etiti ihe omume rụrụ, na Ụlọ eze ma ọ bụ nnyefe, nke Queen, nke mkpụrụ ego nye ụmụ amaala.
Ista Friday bụkwa ezumike ọha na England. Maka ha, ọ bụ ụbọchị ntụgharị uche nke okpukpe ma mara dịka Ezi Fraịde. Anyị nwere ike ịgwa gị otu ihe ahụ gbasara Mọnde na-esote, mgbe enweghị ọrụ.
Mgbanwe nke onye nche
Ịgbanwe nke ndị nche na Buckingham Palace
Maka ndị bekee, ihe niile metụtara ya ọchịchị ya Ọ dị ezigbo mkpa. Ha na-enwe ekele maka ezinụlọ eze. Na, nke ka nke, ha na-ekwo ekworo nke ukwuu maka omenala ndị gbara ha gburugburu. Nke a bụ ihe gbasara mgbanwe a ma ama nke onye nche na Buckingham Palace.
Kwa ụbọchị na iri na otu na iri atọ na ụtụtụ n'etiti May na July (ụbọchị ọ bụla ọzọ nke afọ), ị nwere ike na-ekiri a ememe. Ọ bụ ihe ijuanya ịhụ ka ndị agha na nnukwu okpu ajị anụ na-eji ikuku agha na-aga. Otú ọ dị, anyị ga-agwakwa gị na ọ bụrụ na ị bụghị ezigbo onye na-akwado ụdị omume a, ọ nwere ike ịdị gị arọ.
N'ikpeazụ, anyị akọwawo ụfọdụ n'ime isi Omenala Bekee. Ọtụtụ n’ime ha dị ọtụtụ narị afọ, ma ndị ọzọ adịla nso nso a. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-ahapụrịrị omenala Bekee ndị ọzọ na pipeline, dịka ọmụmaatụ, Ememme midsummer na Stonehenge, ihe ncheta ụwa ama ama megalithic dị na mpaghara Wiltshire. Ma ọ bụ otu inye onyinye cheese nke mejupụtara ịgba ọsọ gbadata na mkpọda iji ruo cheese dị kilogram anọ. Agbanyeghị, naanị ị ga-aga England wee nwee ọmarịcha omenala ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » England » Omenala Bekee
Amalfi Coast: ihe ị ga-ahụ